Somalia: Xubnaha Urur Diimeedka Alsaadicuun Bilxaq Oo Laga Mamnuucay In Ay Ka Dhoofaan Madaarka Muqdisho Iyo Sababta Loogu Diiday! - Wargane News
Home Somali News Somalia: Xubnaha Urur Diimeedka Alsaadicuun Bilxaq Oo Laga Mamnuucay In Ay Ka...
Wararka ka imanaya caasimadda dalkaasi aynu jaarka nahay ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka Magaalada Muqdisho uu go’aan adag ka qaatay kooxda dhawaan dhulka Soomaalida ka ayidday koox diimeedka Alsaadicuun Bil-Xaq.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa u xaqiijiyey Idaacadda Radio Dalsan ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Amar lagu bixiyey in la xidhi karo Madaxda Urur-diimeedkaasi ee ka soo dega ama ka dhoofaya Garoonka Caalamiga ee Aadan Cadde ee magaalladda Muqdisho dalkaasi Soomaaliya si looga hor tago kooxdan oo umadda Soomaalidu guud ahaan ka dideen qorshayaasha ay xambaarsan yihiin ama fikirka ay qabaan.
Koox Diimeedkaasi Alsaadicuun Bil Xaq ayaa waxaa dhawaan lagaga dhawaaqay dalka Masar iyo dalal kale, iyadoo Shaqsiyaad kalena kaga dhawaaqeen magaallooyinka Muqdisho, Bosaaso iyo Hargeysa.
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Eng. C/raxmaan Yariisow ayaa sheegay in Urur-diimeedkaasi yahay mid loogu talagalay in khalkhal lagu geliyo Deganaanshaha dalkiisa sida uu hadalka u dhigay sidaa darteed ay ka hor tagayaan xaalad kastana ay kula dagaalami doonaan.
Go’aankan maamulka Muqdisho qaatay ayaa ku soo beegmaya wakhti dhawaan dhammaan xubnihii ururkaasi taageeray ee Hargeysa kaga dhawaaqay taageeradooda ay ciidamada ammaanka Somaliland xabsiga dhigeen halka sidoo kalena Maamul Goboleedka Soomaaliya ee Puntland uu isagu si cad u sheegay in uu dagaal la galayo kooxdaasi dhulka ay maamulaaana ay ka mamnuuceen urur diimeedkaasi.
2-dii Bishan April ayay ahayd markii jamaacadani ay magaalada Qaahira ka soo jeediyeen bayaankoodii koowaad ee ay ku shaaciyeen mabaadii’dooda iyo hawlgalka ay doonayaan in ay ku faafiyaan dacwaddooda taasi oo keentay in isla toddobaadkaasi 5-tii Bishan ururkaasi hab qorshaysan looga taageero magaalooyinka waaweyn ee dalalka Somaliland iyo Soomaaliya sida Hargeysa Iyo Muqdisho iyo waliba Garoowe.